စီးပွားရေးလှေခါးထစ်အောက်ခြေရှိသူများ၏ COVID အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်ခြင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း
ဇူလိုင်လ 21, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ကရမေလ၏အမေတော်၏အသင်းတော်ဖြစ်သော Merin Chirackal Ayrookaran သည်အိန္ဒိယအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ် Kerala ရှိရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားမျက်နှာဖုံးများပေးသည်။ (ဓာတ်ပုံ - GSR သို့ပေးပို့သည်)
ဤအတူ Corona ဆက်သွယ်မှုကျနော်တို့ကနေနောက်ထပ်အသုံးဝင်သောစာဖတ်ခြင်းကိုဆက်ကပ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညီအစ်မများအစီရင်ခံစာ (အမျိုးသားကက်သလစ်သတင်းထောက်တစ် ဦး စီမံကိန်း) ။ GSR သည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမှကိုင်တွယ်သောပြandနာများနှင့်ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောပထမ ဦး ဆုံးအစီရင်ခံစာများ၊ ပြCatholicနာများပေါ်ပေါက်စေသောအခြေခံတရားမမျှတမှုများကိုကျော်လွှားရန်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ကက်သလစ်သီလရှင်များစွာ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဖော်ပြသည်။ GSR သည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်အဖြစ်အပျက်များလေ့လာရန်ဘဏ္aာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်၊အိန္ဒိယသီလရှင်များသည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားပိတ်ဆို့နေစဉ်အိမ်သို့သောင်တင်နေသည်သက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ရာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးများအားကူညီရန်နိဒါန်းကစတင်ခဲ့သည်။
"အိန္ဒိယသီလရှင်များသည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုကူညီနေသည်။ ” တင်ခဲ့သည်အများအပြားကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအစီရင်ခံစာများတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညီအစ်မများအစီရင်ခံစာ။ GSR COVID-19 ဖော်ပြသည့်မတရားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများကပြsufferingနာများအားပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အဖြစ်အပျက်များအားလူသားတို့ခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြချက်များ၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလှေကားအရောင် coded ဖြစ်ပါတယ်.)
ဤအဖြစ်အပျက်သည်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှအမျိုးသမီးများ၏တီထွင်ကြံဆပုံနည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ ဤဖြစ်ရပ်တွင်ကက်သလစ်အစ်မများကဆင်းရဲသားများ၏အခြေအနေနှင့်ဤဖြစ်ရပ်တွင်ကူးစက်ရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုကိုခံနေသောအိန္ဒိယရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ။ ၎င်းသည်လူ့လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ရေးအတွက်ပcrisisိပက္ခအခြေအနေများတွင်အမျိုးသမီးများ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က GCPE စီးရီးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ.
ဤကက်သလစ်သီလရှင်များသည်အလုပ်လက်မဲ့နှင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုမည်သို့ကူညီသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းကသူတို့ကိုအိန္ဒိယ၏တင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖောက်သည့်အတွက်အဖမ်းခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သူတို့သည်များစွာသောသူတို့၏နေအိမ်များသို့ခြေလျင်ဖြင့်ပြန်လာကြရသည်။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိုးရများမလုပ်ဆောင်သည့်အခါချက်ချင်းနှင့်ဒေသန္တရအရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏ထိရောက်မှုကိုတွေ့မြင်ရပြီး၊ ကြီးမားသောအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများသည်အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခွအေနအဘို့အဆိုပြုချက်မှုတ်သွင်း ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ် နှင့် GCPE ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောစိတ်ကူးများ: Alps-Adriatic ကြေငြာချက် - COVID ကမ္ဘာကြီးအတွက်နိုင်ငံရေးအသစ်. ကမ္ဘာတဝှမ်းဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ကဲ့သို့သောဂြိုဟ်ခြိမ်းခြောက်မှုများစွာအားပြည်နယ်များအားမလိုလားအပ်သောတုန့်ပြန်မှုများသည်ဒေသတွင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး၊ ကိုကို နယူးပုံမှန်.
လက်ဝဲမှ Loreto Srs ။ , အမျိုးသားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးရပ်နားမှာပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားများအတွက်အစားအစာအထုပ်နှင့်အတူအပူပူပြင်းလျက်စောင့်ဆိုင်းနေ, Nirmala Toppo, Sawanti Lakra, Jiwanti Tete, Rajini Lugun နှင့်ဂလိုရီယာ Lakra ။ (ဓာတ်ပုံ - GSR သို့ပေးပို့သည်)
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညီအစ်မများအစီရင်ခံစာ။ ဇူလိုင်လ 13, 2020.)
နယူးဒေလီ - Sr; Sujata Jena ဟာ WhatsApp ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာခေါင်းပေါ်လေးလံနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်တစ် ဦး ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့ပြီးနောက်အိပ်မရခဲ့ဘူး။ “ သူမမျက်ရည်စများစိုစွတ်နေတဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော့်ကိုခြောက်လှန့်နေတယ်” ဟုအသင်းဝင်ကပြောသည် ယေရှုနှင့်မာရိတို့၏မြင့်မြတ်သောနှလုံးသား Global Sisters အစီရင်ခံစာတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
Jena သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများတွင်အိန္ဒိယတစ်ဝှမ်းမှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမြင်သောအခါအသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှေ့နေနှင့်သီလရှင်သည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအိမ်သို့ရောက်ရှိရန်ကူညီခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုတွင်အလုပ်သမား ၁၀ ဦး သည်အိန္ဒိယအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ကာရာလာရှိအခန်းတစ်ခန်းတွင်ပြည့်ကျပ်နေသည်။ သူတို့ကသူတို့အလုပ်ရှင်ကသူတို့ကိုသော့ခတ်ထားပြီးအရှေ့မြောက်မိုင် ၁၀၀၀ ကျော်ရှိ Odisha ရှိသူတို့၏ကျေးရွာများသို့အကူအညီလိုအပ်နေသည်ဟုဆိုသည်။
မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် Jena သည် Odda ၏မြို့တော် Bhubaneswar ရှိသူမ၏သီလရှင်ကျောင်းကိုကန့်သတ်ထားသဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုကူညီသည့်လူမှုမီဒီယာကွန်ယက်တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရှိကမ်းခြေ ၁၀ ခုအပါအ ၀ င်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၃၀၀ ကျော်သည်အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းရှိ Bihar, Chhattisgarh, Odisha နှင့်အနောက်ဘင်္ဂလားစသည့်ပြည်နယ်များရှိ၎င်းတို့၏ကျေးရွာများသို့ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် Jena ရဲ့အားထုတ်မှု.
Jena သည်ကက်သလစ်သီလရှင်ရာနှင့်ချီ။ ရှေ့တန်းတွင်ရှိနေသည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ၂၁ ရက်ကြာပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ၀ န်ကြီးချုပ် Narendra Modi သည်မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့သန်းခေါင်ယံမှအိန္ဒိယလူ ဦး ရေ ၁.၃ ဘီလီယံအပေါ်လေးနာရီကြိုတင်အသိပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ။
အဆိုပါ lockdown, စဉ်းစား ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အပြင်းထန်ဆုံးကြိုးပမ်းမှု ရောဂါကူးစက်မှုကိုတားဆီးရန်အတွက်ဇူလိုင် ၃၁ ရက်အထိအမျိုးမျိုးသောအပန်းဖြေအနားယူမှုများဖြင့်ငါးကြိမ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Salesian Fr. က“ အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါသူတို့မှာနေစရာနေရာမရှိ၊ ဝင်ငွေလည်းမရှိ၊ လုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူး။ ဂျိုး Mannath, ၏အတွင်းရေးမှူး ဘာသာရေးအိန္ဒိယညီလာခံတိုင်းပြည်အတွင်းရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊
Mannath ကငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့် coronavirus ကူးစက်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် "ဖရိုဖရဲ" ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြို့ကြီးများမှအလုပ်သမားများ၏ "။
ဇွန် ၆ ရက်တွင်အိန္ဒိယဘိရှော့များ၏အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ Caritas India ကပြောကြားခဲ့သည် webinar ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအပါအ ၀ င်ဘုရားကျောင်းပိတ်ထားသည့်ကာလအတွင်းလူပေါင်း ၁၁ သန်းကျော်ထံချာ့ချ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသမီး ၁၀၀၀၀၀ နီးပါးအပါအ ၀ င်အိန္ဒိယ၏ဘာသာရေးပေါင်း ၁၃၀,၀၀၀ ကျော်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် Mannath ကထို ၀ န်ဆောင်မှုအများစုကိုဘာသာရေးများမှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်လမ်းများ၊ အမိုးအကာအိမ်များနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ပြွတ်သိပ်သည့်နေရာများရှိလမ်းများပေါ်တွင်သောင်တင်နေသောအလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Diocesan, အသင်းတော်နှင့်အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီများ၏အလှူငွေများဖြင့်သူတို့နေအိမ်များသို့ရောက်ရှိရန်အလုပ်သမားများအားအမိုးအကာ၊ အစာနှင့်ငွေများထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Mannath ကကက်သလစ်ဘာသာရေးသည်“ ပိတ်ဆို့ခြင်းခံထားရသူများအားလုံးအတွက်လိုအပ်ချက်များအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာအလုပ်တစ်ခု” လုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့အရာဟာဘယ်အစီရင်ခံစာမှာမဆိုထက်“ အများကြီးပိုများတယ်” လို့ဆီလီဇန်ဘုန်းတော်ကြီးကပြောပါတယ်။
“ အကြီးအကဲကြီးတွေကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမြန်ဆုံးအစီရင်ခံတင်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါအစီရင်ခံစာ ၇၅၀ ကျော်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ ဘာသာရေးကပြန့်ပွားစေတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြတယ်” ဟုသူကဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင် GSR သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
Mannath ကအိန္ဒိယ၏ကက်သလစ်ဘာသာရေးသည်အလုပ်သမားများကိုကူညီရန်ဗဟိုမှညှိနှိုင်းထားသောအစီအစဉ်မရှိဘဲတစ် ဦး ချင်းနှင့်အသင်းတော်များကိုရန်ပုံငွေပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောဘာသာရေးတစ်ခုမှာ Loreto Sr. Punitha Visuvasam၊ အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ် Jharkhand ၏မြို့တော်၊ Ranchi အနီးရှိ Doranda ရှိထောင်နှင့်ချီသောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေထိုင်သည်။
အလုပ်သမားများသည်ကုန်တင်ကားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများပေါ်သို့စတင်ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Loreto သီလရှင်များသည်မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဂျဟаркခန်းရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများသို့အစားအစာအထုပ်များဖြင့်သွားခဲ့သည်။ သီလရှင်များကအိမ်အပြန်လမ်းတွင်လူများစွာလမ်းလျှောက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည် “ သူတို့ကိုသူတို့ရွာတွေမှာဘတ်စကားစီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခဲ့တယ်” ဟု Visuvasam က GSR ကိုဖုန်းဖြင့်ဖုန်းဆက်သည်။ *
အလုပ်သမားများသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေခြင်း၊ ရေငတ်။ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ကုန်တင်ကားများပေါ်ရှိတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့အတူတကွစုရုံးနေခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းသူမကပြောကြားခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာအမေရိကန်သည်နေ့စဉ်အကူးအပြောင်းတွင်လူ ၄၀၀ မှ ၅၀၀ အထိကျွေးမွေးခဲ့သည်။
သူတို့သည်အသင်းတော်များကဲ့သို့သောအခြားအသင်းတော်များနှင့်လည်းပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် ဒါန၏ခရစ်ယာန်သာသနာပြုများနှင့်ကက်သလစ်လူငယ်များသည် Ranchi Archdiocese ၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်အစားအစာဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။
Ranchi ရှိအသင်းတော်နောက်တစ်ခု Tildonk ၏ Ursuline ညီအစ်မAprilပြီလ ၃ ရက်မှစ၍ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများထံရောက်ရှိခဲ့သည်။ သီလရှင်များသည်အချို့သောသူများသည် Ranchi ၏အရှေ့မိုင် ၄၀ ခန့်တွင်ရှိသော Muri ရှိသူတို့၏ကျောင်းတွင်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။
အသင်းတော်မှ Ranchi ပြည်နယ်၊ Sr. Suchita Shalini Xalxo က၎င်းတို့အားအစားအစာ၊ အဝတ်အထည်နှင့်လုံခြုံရေးပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်ဟု GSR အားဇွန် ၁၇ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
Xalxo ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည်သူတို့၏စင်တာသို့ရောက်သောအခါစိတ်ပျက်ဖွယ်အခြေအနေများတွင်ရှိနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ လူအတော်များများကနှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက်အစာမစားဘဲလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ တချို့ကပြည်နယ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးသွားသောအခါရဲများကရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်ခြင်းသည် Sr. Tessy Paul Kalapparambath ကဲ့သို့သောသူများအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ သူမ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောသာသနာပြုညီအစ်မများ** အိန္ဒိယအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ Telangana ပြည်နယ်၏မြို့တော် Hyderabad တွင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
သူတို့၏အသစ်စက်စက်အိမ်သည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအနီးတွင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၂၀၀၀ ခန့်အားချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာနှင့်သောက်ရေကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ သူမ၏အဖွဲ့သည်ရထားဘူတာများ၌လည်းအစားအစာအထုပ်များကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
တီကက်သလစ်ကက်သလစ်ဆရာတော်များကောင်စီ၏အလုပ်သမားကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး Kalapparambath က GSR သို့ပြောကြားရာတွင်“ ဒီနွေရာသီမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတာဝမ်းနည်းစရာပဲ။
Hyderabad, အ၏ Sr; Lissy ယောသပ်သည် မာရီယာ Bombina ၏အစ်မများ Aprilပြီလအစောပိုင်းတွင်မီဒီယာများကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏အခြေအနေကိုပြောပြစဉ်ဘတ်စ်ကားနှင့်ဘူတာရုံများသို့သွားခဲ့သည်။ သူမသည်အာသံ၊ Jharkhand၊ Odisha၊ Uttar Pradesh နှင့်အနောက်ဘင်္ဂလားမှအလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအစားအစာများ၊ ငွေများ၊
"ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပဲ" ဟုဂျိုးဇက်က GSR သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
အုပ်စုတစ်စုကဂျိုးဇက်ကိုပြောကြားရာတွင်သူတို့၏အလုပ်ရှင်သည်အိမ်နီးချင်း Telangana ရှိ Karimnagar သို့ထရပ်ကားတစ်စီးဖြင့်မောင်းနှင်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟုဆိုသည်။ တောင်ဘက်မိုင် ၁၀၀ ကျော်ဝေးသော Hyderabad သို့သွားရန်နောက်ထပ်ထရပ်ကားတစ်စီးကိုသူတို့ရှာနိုင်ခဲ့သည်။ ရဲများကသူတို့ဘယ်ကလာသည်ဖြစ်စေပြန်ရန်ပြောသည့်အခါဂျိုးဇက်သည်သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယောသပ်က“ ငါတို့လုပ်ခဲ့တာကသူတို့အတွက်အစားအစာစီစဉ်ပေးဖို့ပဲ။
Jena ကဲ့သို့ပင်ဂျိုးဇက်သည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အကူအညီရှာရန်လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူများကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂျိုးဇက်ကအလုပ်သမားများ၏ဓာတ်ပုံကိုလူမှုမီဒီယာတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးရှေ့နေတစ် ဦး သည်ရဲကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးထိုပုံကိုခရိုင်စုဆောင်းသူထံပေးပို့ခဲ့သည်။
“ ဆင်းရဲတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလူမှုမီဒီယာတွေမှာမျှဝေတာကအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ အခြေအနေတွေပြောင်းသွားပြီးပြည်နယ်အလုပ်သမားရုံးကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ အငယ်တန်းအရာရှိတ ဦး ကအလုပ်သမားများကိုယာယီတဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး Odisha သို့ဘတ်စ်ကား ၂ စီးစီပေးခဲ့သည်။
Kerala ရှိသီလရှင်အချို့သည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ကရမေလအမေ၏အသင်းတော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည် CMC ထိုနှစ်တွင်အိုဆိဒါရှိခရစ်ယာန်ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုများမှထွက်ပြေးလာသူများကိုကူညီရန်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများလှုပ်ရှားမှု။ နောက်ပိုင်းတွင်အခြားပြည်နယ်များမှအလုပ်သမားများအားကူညီရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Sr ။ Merin Chirackal Ayrookaran ကသူတို့ဟာဆေးခန်းတွေ၊ တယ်လီဖုန်းအကြံပေးတွေစီစဉ်ပြီးသောင်တင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအိမ်ပြန်ဖို့သွားပြောတယ်။
ဒေလီမှာ မြင့်မြတ်သောနှလုံး Sr ။ Celine George Kanattu သည်သောင်တင်နေသည့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုကူညီပေးသူတို့တွင်ပါဝင်သည်။ အချို့သောအိမ်ဖော်များကသူမစားရန်လာသောအခါသူမသည်အလုပ်သမားများကိုစတင်ကူညီသည်။ လှူဒါန်းသူများနှင့်သူမ၏အသိုင်းအဝိုင်း၏အကူအညီဖြင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၆၀၀ ခန့်အတွက်အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊
Kanattu ၏အကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ် ဦး မှာ Jameel Ahmed ဖြစ်သည်။ လေးယောက်၏ဖခင်ကကက်သလစ်သီလရှင်များကသူတို့ကိုအစားအစာပစ္စည်းများမထောက်ပံ့ပါကမိသားစုသည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး။ သေဆုံးသွားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူခံစားချက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့ကြသည် နှမအန်းယေရှုခရစ်မာရိအိန္ဒိယအလယ်ပိုင်း Chhattisgarh ပြည်နယ် Jashpur ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ၏ဒါရိုက်တာ။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည်သူမလက်ထဲမှအစားအစာအထုပ်များကိုချက်ချင်းယူပြီးချက်ချင်းစားမည်ဟုသူမကပြောသည်။ “ သူတို့က 'Madam၊ ငါတို့အခုသွားနိုင်တယ်။ မင်းတို့လိုမင်းလိုလူတွေထပ်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု Mary Nun မှ Franciscan သာသနာပြုများက GSR သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
Jena ဟာသူမကူညီခဲ့သူတွေနဲ့ WhatsApp အုပ်စုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ “ သူတို့ကငါ့နံပါတ်ကိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတယ်။ ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအများကြီးရ တစ်ခါတလေမနက် ၂:၃၀ နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်မအိပ်ရာဝင်နိုင်ပြီ။ အိမ်ပြန်ချင်သူဘယ်သူမဆိုလုံခြုံစွာပြန်လာနိုင်မယ်။ ”
သူမငိုနေသောမိန်းကလေး၏ဓာတ်ပုံကိုသူမ WhatsApp ဖော်ပြသည့်ပုံအဖြစ်တင်ခဲ့သည်။ “ နောက်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအိမ်ကိုမရောက်မချင်းငါဆက်သွားမှာပါ” ဟုသူကဆိုသည်။
[Jessy Joseph သည်နယူးဒေလီရှိအလွတ်တန်းစာရေးဆရာဖြစ်သည်။ ဤသည်ပုံပြင် GSR နှင့်အကြားပူးပေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယကိစ္စလူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးသတင်းများကိုအဓိကထားသောနယူးဒေလီအခြေစိုက်သတင်းပေါ်တယ်။ ]
လူငယ်ခေါင်းဆောင်များတောင်းဆိုမှုလှုပ်ရှားမှု - လူငယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတတိယအကြိမ်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း
ရဲပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကဘာသင်ပေးနိုင်သလဲ။
သြဂုတ်လ 27, 2020 အင်္ဂါရပ်များ 0
Truth, Posttruth နှင့် COVID-19: ပညာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအချို့
ဧပြီလ 16, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာတရားလွန်ကာလခေတ်တွင်နေထိုင်နေကြပါသလော။ အဘယ်အရာကိုဒြပ်စင်ဒီဖွဲ့စည်း? ဤသည်သည်အထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီများ၌ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုကန ဦး ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ပညာရှင်များကမည်သို့တုံ့ပြန်ကြမည်နည်း။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဇြန္လ 30, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0